Igbo, Romans, Lesson 015 -- He who Judges Others Condemns Himself (Romans 2:1-11) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 015 (He who Judges Others Condemns Himself)
NDI ROM - Onye Ezi Omume Ka Jehova Bu
Omumu na akwukwo ozi nke Pol degaara ndi Rom
IKPEHE 1 - Ikpu Niile Chineke Katoro Ndi Mmehie Niile Ma N’onye Ezi Omume Naido Ya Nso Ndi Nile Kwere Na Kraist (Ndi Rom 1:18 - 8:39)
A - Ndi Niile Na-aga N’ihu Na-akpata Onwu Nke Onye Ajo Omuwe, Chineke Ga-ekpekwa Mmadu Niile Ikpe Ziri Ezi (Ndi Rom 1:18 - 3:20)
2. Ekpughere ọnuma nke Chineke megide ndị Juu (Ndi Rom 2:1-3:20)
a) Onye n ekpe ndi ozo ikpe onwe ya ikpe (Ndi Rom 2:1-11)
NDI ROM 2:1-2
1 Ya mere i bu ihe ngọghari, gi nwoke, onye obula bu onye n’ekpe ikpe, n’ihi na n’ihe obula nke gi n’ekpe onye ozo ikpe, i juo onwe gi ikpe; n'ihi na unu ndi n whokpe ikpe n practiceme ihe ndia. 2 Ma ayi matara na ikpé nke Chineke bu ezi-okwu megide ndị na-eme ụdị ihe ndia.
Okpueze nke mmehie bụ ihu abụọ. Ndi mmadu n’eme ka ndi ezi omume, onye mara ihe ma nweko nke oma, n’agbanyeghi na ha matara site na akaebe nke akọnuche ha na, n’idi nso nke Chineke, ha buru ndi ajo omume. N'uzo ihu abụọ a, ha na-ekpe ndị enyi ha ikpe, ma na-ekwu okwu banyere nlelị, dị ka à ga-asị na ha onwe ha bụ ndị na-egosipụta nsọpụrụ Chineke, na ndị enyi ha bụ ihe mkpofu.
N'agbanyeghị nke ahụ, Pọl mebiri mpako gị. Ọ na-ewepụ gị nkpuchi ụgha, na-egosi gị na ị na-enweghị ezi uche. Imaara onye na-abụghị eziokwu? More na-ekwu eziokwu karịa ya. Seen hụrụ onye ogbu mmadụ? Igbu mmadu kariri gi n’ike. Ihe ị na-eche banyere onwe gị abụghị eziokwu. Mụọ nke Chukwu katọrọ gị. Ọ na-ebu ụzọ kpọọ ndị prọfesọ ụgha na-asọpụrụ Chineke, ndị na-ewere onwe ha dị ka ndị ọzọ na-eme mmehie, ma ha amaghị ihe ọ bụla banyere ezi nsọ nsọ. Ndi mo-agha adighi kpogide Jizos, kama site n’aka ndi mo-ojo nke ihu oma nke okpukperechi ma dikwa nganga dika nnuku olu n’egwu Chineke, ma n’ime ili ha juputara na ihe nile adighi ocha.
Chineke na-akatọ gị ọ bụghị naanị maka ọrụ gị, kamakwa n'ihi ebumnuche gị, echiche gị na echiche gị. Nrọ gi bu ihe ojoo site na nwata. Ebumnuche gị, ị na-achọ ọdịmma onwe gị. Na-enupụrụ Chineke isi, na-emegide atụmatụ ya, na-emebi iwu ya, na-eleda mmadụ ibe gị anya. Ndi na-akwa iko na mmụọ gị, kewapụkwa n’ebe Onye Okike gị nọ. Echiche ọjọọ gị si n’obi gị apụta. Agbanyeghị, na Ikpe-azụ nke ikpe-azụ, ị ga-anụ okwu gị edeworo ede, wee hụ ọrụ foto gị, yana ebumnuche gị, ị ga-amakwa jijiji, wee gbaa nkịtị. Sinful bụ onye mmehie. Rụrụ arụ na ezumike nke obi gị. Gosiputa obi ojoo gi n’agha, ma juo onye mmehie ozo. Onye agbata obi gị nwere ike bụrụ onye ajọ omume. Ma ekworo gi megide nmebi iwu ya abughi ihe akaebe. I ghaghi inwu n'ihi nmehie nke aka gi, nihi na iza aza onwe gi n’ihu Chineke. Yabụ, mara onwe mpụ gị n'ịdị nsọ nke Chineke.
Ị nwere ike ịnabata okwu ndị a siri ike, ma ọ bụ naanị na gị na ha nwere ike ịtụgharị uche, na-enweghị nganga ma ọ bụ wụsa obi gị na nchegharị n'ihu Onyenwe gị. Mara mara na amaghị ama gbasara ọnọdụ gị anaghị azọpụtakwa gị na ikpe nke Chineke. Ikike ebighi ebi ga-ekpe gị ikpe ma maa gị ikpe. Okpukpe dị iche iche dị mkpa niile nke ụwa matara ihe maka ụbọchị ikpe. Offọdụ n’ime ha na-akpọ ya ofbọchị Mbilite n’Ọnwụ, Al-Qari’ah, ma ọ bụ ụbọchị ikpe. Naanị ndị ekweghị ekwe gọnarị iguzo n'ihu Chineke dị ndụ. N’oge ahụ, a ga-ekpughe ihe nzuzo gị niile, echiche gị, okwu gị na ihe arụ gị n’ihu mmadụ niile, ị ga-aza ajụjụ maka okwu arụ niile i kwuru, maka mkpụrụ ego ọ bụla ị dajụrụ, na oge ọ bụla ị na-ejideghị ya. inye Chineke otuto; n’ihi na ị bụ onye nlekọta nke onyinye Chineke, ọ ga-edozikwa gị ihe ọ bụla o nyefere n’aka gị. Ụzarị nke otuto nke Chineke ga-abanye n’ime ụdọ obi gị na nke gara aga, n’ụzọ ziri ezi na nke miri emi karịa ụzarị ọkụ X na ngwa ndị ọzọ a ma ama n’ụlọ ọgwụ. I g standguzo n'ebe ahu kpamkpam.
EKPERE: Chineke di nso, Gi onwe gi bu onye ebighebi na onye ezi omume, ma mu onwe m bu onye mmehie. Gbaghara m ọrụ m niile na-atụ egwu, ma meghee obi m ka ihe unyi niile wee pụọ n'ìhè gị. Ana m ekwupụta mmehie m niile n'ihu gị, rịọkwa gị ka o nye m Mmụọ nke ihunanya gị nke agaghị m ajụ ma ọ bụ kpọọ mmadụ ọ bụla asị ma ọ bụ kpọọ ya asị, mana mụ na ịhụnanya na nghọta. Mu onwem bu onye kariri ndi mmehie. Meere m ebere, Chineke, dịka ebere gị si dị, ma mebie ihe ikpe-azụ nke ikpeazụ nke mpako m na akọnuche m ka m wee nwee obi dị ala.
Olee otu mmadu si ekpe onwe ya ikpe n’ihe obula o na-ekpe onye ozo ikpe?
Page last modified on January 25, 2021, at 02:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)